Ubugcisa obuyimfihlo bokuThengiswa kweDijithali | Martech Zone
Ubugcisa obuyimfihlo bokuThengiswa kweDijithali
NgoLwesibini, Septemba 10, 2013 NgoLwesithathu, Septemba 11, 2013 Douglas Karr
Le infographic evela kwi-Hostgator igxuma ijikeleze phakathi kwentengiso kunye nokwazisa, izixhobo kunye neziganeko zokwenyani zentengiso yedijithali. I-SEO sisicwangciso-qhinga, kodwa iAnalytics ayisosicwangciso-sisixhobo sokunceda ukumisela iqhinga. Intengiso ehlawulelweyo iyinxalenye yesicwangciso sisonke kodwa ayisosicwangciso ngaphakathi kwayo. Kwaye uguquko ayisosicwangciso, sisiphumo seqhinga. Uhlobo olungaqhelekanga lokuba bayidibanisa njani, kodwa zikhona izixhobo, izibhengezo kunye nezibalo ezibonelela ngexabiso.
I-Hostgator: Ukuthengisa ngokufanelekileyo into ethile kwidijithali kungabonakala kunzima kwaye kuyimfihlakalo. Kukho iindlela ezininzi ekufuneka zilandelwe ngaxeshanye kwaye zilinganiswe ukuqinisekisa ukuba wenza owona msebenzi mhle, kwaye ufumana eyona buck yakho.
Andikholelwa ukuba ukuthengisa kwindawo yedijithali kuyinto engenakwenzeka okanye engaqondakaliyo. Akuzange nanini na sibe nohlobo lwezixhobo esinalo lokwenza izigqibo ezikrelekrele. Ngaphandle kokukhankanywa kwentengiso eshukumayo, iindlela zevidiyo, kunye nentengiso ye-imeyile- ndicinga ukuba le infographic iphosile uphawu.
tags: UhlalutyoUkuThengiswa kweMpahlaukuguqulwahostgatorSEO
Ividiyo: Intlalontle xa kuthelekiswa nokuKhangela kweSmackdown
Kutheni usebenzisa uMxholo weVidiyo kwiMithombo yeendaba yeNtlalo?